Ezigbo mmasị banyere Chile
Njem nleta South America
Chile bụ mba dị ịtụnanya nke na-enweghị ike ịhapụ onye ọ bụla na-enweghị mmasị. Banyere Chile, ị nwere ike ịkọ ọtụtụ eziokwu ndị na-adọrọ mmasị, nke bụ naanị ihe, mgbe ị na-akọwa ya, ịnwere ike ịkpọtụ aha "ọtụtụ", ruo mgbe ebighị ebi, na-edepụta àgwà ya. Ikekwe nke a bụ n'ihi na mba ahụ nọ n'akwụkwọ ndekọ ụwa.
Chile - ihe omimi banyere mba
Obodo Chile nwere ọgaranya na nzuzo, nke mere ka ọ bụrụ ihe mara mma maka ndị njem nleta. Ị nwere ike depụta ihe ndị dị otú ahụ na-adọrọ mmasị ga-enyere gị aka ịmatakwu àgwà nke mba a:
Chile bụ mba ndịda kachasị n'ụwa, ọ dị 900 kilomita site na Antarctic. Ebe ya bụ n'ebe ndịda-n'ebe ọdịda anyanwụ South America. Ọnọdụ ndị dị na Chile bụ Peru (nke dị n'ebe ugwu), Bolivia na Argentina (n'ebe ọwụwa anyanwụ).
Chile bụ ala dị ala, obosara ya bụ nke kachasị dị 200 kilomita. Ogologo Chile si n'ebe ugwu ruo n'ebe ndịda karịrị kilomita 4000.
N'ala Chile, enwere ọzara nke a na-akpọ Atacama . Ebe a bụ otu n'ime ndị na-anụ ọkụ na mbara ala, enweghi ọdịda dị ịrịba ama maka narị afọ anọ ugbu a.
Na mba ahụ bụkwa ugwu ugwu Gualaliri , nke ịdị elu ya bụ 6 071 m, ọ bụ otu n'ime ihe kachasị elu nke ọkụ ọkụ. Ma ọnụ ọgụgụ kasị elu nke mba ahụ bụ ugwu Ojos del Salado , ọ dị n'ókè nke Argentina na ịrị elu 6893 m.
A na-ele Patagonia Chilea anya dịka ebe kachasị mma na gburugburu ụwa, ọ bụ ọbụna n'okpuru nchedo nke otu mba dịka UNESCO. Na Patagonia, igwe anaghị agbachi agbawa, n'ihi ekele a, a na-ewu onye nlekọta mbara igwe kasị ukwuu na Southern Hemisphere na ndagwurugwu Valle de Elqui .
Na Chile, a na-etinye ọla kọpa n'ọtụtụ buru ibu, ebe a bụ ihe kachasị mịnụ n'ụwa maka itinye ihe igwe a - El Teniente . Nakwa na mba bụ nnukwu ígwè ọla kọpa ụwa kachasị elu Chukikamata , nke metụkwara ugwu kachasị elu. Ụlọ ọrụ a dị maka ndị nleta nleta na-esonye na ọtụtụ mmemme nlegharị anya.
Obi abụọ adịghị ya, ọ dị mkpa igosi Ista Island - agwaetiti nke dịpụrụ anya site na ebe obibi kachasị dị nso n'ụwa.
Ihu igwe dị na Chile dịgasị iche iche ma jikọta ala ịkpa na-adịghị ndụ, ugwu mgbago na olulu mmiri ebighi ebi na oké osimiri oké osimiri. Ya mere, ị nwere ike ịnụ ụtọ izu ike dị iche iche ma dịgasị iche iche, na-etinye oge n'osimiri oké osimiri, wee si n'ebe ahụ gaa ebe ndị a na-egwu ski, mara dị ka ihe kasị mma n'ụwa.
Na Chile bụ nanị ski resotu n'ụwa, nke dị n'ụsọ oké osimiri - El Mirador . Ya mere, ebe ị na-ezu ike n'akụkụ osimiri , ị nwere ike ịbanye n'ọdụ ụgbọ ala naanị ọkara otu awa.
Ndị amaala Chile bụ otu n'ime mba kachasị iche n'ụwa. Mba Chile na-etinye uche n'àgwà ndị mmadụ na ndị India bi n'ókèala ahụ, yana ndị na-asụ Spanish. Na usoro nke nchịkọta nke steeti, ọbara ndị Chilean na-esiwanye ike na "admixture" nke ọ bụla mba ọ bụla nọ n'ụwa. Taa, n'etiti ndị bi na mba ahụ nwere ike izute ọnụ ọgụgụ dị nnọọ ukwuu nke ndị si mba Europe na Slavic si mba ọzọ pụta. Ma na Chile, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume izute ndị si mba Africa na mba ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Nke a abụghị ikpe maka South America.
Ọnụ ọgụgụ ụmụ anụmanụ ndị nwere ike imerụ ahụike ụmụ mmadụ na mba ahụ adịghị mma. Otú ọ dị, n'ókèala Chile dum, ị nwere ike izute ọtụtụ ụdị nsị na-egbu egbu (nwanyị di ya nwụrụ na nwa ududo). Nri nke ụmụ ahụhụ ndị a na-etinye ụmụ mmadụ aka ọjọọ. Onye udide udiri na-ebi na nnukwu ụlọ obibi nke mba ahụ.
Mana nke a abụghị ihe nzuzo nile nke Chile. N'oge okpomọkụ, ụfọdụ mmiri nke mba ahụ malitere "ifuru" site na mmepụta ihe mgbawa nke ụdị algae pụrụ iche. Emere ihe omume a "oke uhie". A na-amachibido mmiri na-eto eto, ma na-eri nri mmiri na azụ na oge a, ebe ọ bụ na ụfọdụ n'ime algae ndị a na-egbu mmadụ, na anụ nke azụ na-eri ha maka nri, na-etinye ume nke ukwuu nke na-arịa ọrịa na-akpata ọrịa na-egbu egbu. Nke ahụ bụ, ihe ọ bụla e si enweta mmiri kwesịrị ịtụle dị ka nke nwere mmetọ. Ọ bụrụ na ị na-eji mmiri maka ịṅụ ihe ọṅụṅụ, na-esi nri ma ọ bụ na-ehichapụ ezé gị, ịkwesịrị ịme ya. A ghaghị ikpo anụ na anụ ọkụ. Ọ dị mkpa ịsachacha ma mkpụrụ osisi ma akwụkwọ nri ka a zụrụ. Mkpụrụ osisi, na mgbakwunye na ịsa, ga-ehichapụsị elu elu tupu ị rie.
Ebe ndị dị na Chile
Culture nke Uruguay
Ezigbo mmasị banyere Peru
Hotels na Ecuador
Ememe na Chile
Uru visa nke Uruguay
Uruguay ebe nkiri
Ememe na Colombia
Ememe na Argentina
Ụgbọ njem Bolivia
Visa ka Chile
Ịgba ọgwụ mgbochi maka njem na Colombia
Mgbaaka mere nke roba agbụ "Shnurki"
Ọgwụgwọ nke akpịrị n'ụlọ n'ụlọ ndị okenye
Ụgbọ ala Cable
Ọnwa ole na ole mgbe Dufaston gasịrị
Astenozoospermia - ọgwụgwọ
Ngwongwo apata - echiche mbu nke ihe nri di nma magburu onwe ya
Chlorophyllipt maka ụmụ amụrụ ọhụrụ
MCC maka ụkọ ọnwụ
Osimiri kachasị mma n'ụwa
David Duchovny nwere kpakpando na Hollywood Walk of Fame
Atụmatụ maka Christmas maka ego, ịhụnanya na ọṅụ
Janet Jackson kọrọ banyere ịgba alụkwaghịm ma laghachi na ebe ahụ
Eji aka nke aka gị
24 ihe ndị a ga-agbaziri n'aka ndị bi na Scandinavian Peninsula
Kedu otu esi ahọrọ garlic maka akuku maka oyi?
Uwe ojii na-acha ọcha olu
Ngwadogwu-ihe mgbakwasị ụkwụ na mgbatị
Basilica nke ndị nsọ Pita na Pọl